Banaanbax kadhan ah Soomaaliland oo Garoowe kasocda maanta. – Radio Daljir
Banaanbax kadhan ah Soomaaliland oo Garoowe kasocda maanta.
Luulyo 21, 2016 1:06 b 0
Garoowe, July 21 2016–Banaanbax loogasoo horjeedo duulaanka maamulka Soomaaliland uu ku hayo dhulka Puntland ayaa ka socda magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. waxaana banaanbaxaan ka qeyb galaya boqolaal shacab ah oo wata boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo ka dhan ah Maamulka Soomaaliland.
Xilli hore oo saaka ah ayaa waxaa dadweynaha Garowe loogu yeerayay inay kasoo qeyb galaan dibad bax lagu muujinayo sida shacabka reer Puntland ee ku dhaqan caasimadda ugasoo horjeedaan duulaanka qaawan ee Soomaaliland kusoo qaaday gobolk Sanaag.
Mudada uu socdo banaan baxaani waxaa lagu wadaa inay kasoo qeyb masuuliyiin katirsan dowladda Puntland gaar ahaan maamulka gobolka Nugaal iyo kan degmada Garowe.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo Tallman.
on Boosaaso: Barashada Farsamada Gacanta (Warbixin)Wan.doonYa ima.laga cawiyo.fraamd.lydhka. Oo.ada iyo adaa ain.igu bahanaya.